Ngamunye wethu namanje esikoleni ekhetha (ngokuvamile ngokungazi) ububanzi eyinhloko izithakazelo zakhe, okuyinto ke ngokuvamile kuba ubuthishela. Othile uthatha emhlabeni, umuntu - imishini nemithetho lokukhanda. Umuntu angamuka nalo izithombe yobuciko, elinye - ukukhuluma nabantu futhi babasize. Ukusiza anqume ku ukuthambekela can uphethwe ngokwengqondo. It luchaza ububanzi lapho umuntu kungaba njengoba kuphumelele. Ngokwesibonelo, uma ukuhlolwa inike okuthandayo endaweni yolwazi "indoda - uhlelo uphawu", ngakho-ke umgwaqo ngqo zezilimi, zezibalo kanye computer. Isayensi yanamuhla, bafundzi ulimi, ishintsha njalo. Phakathi kwabo ngokuqhubekayo namandla ukuxhumana futhi ngaphezu kwalokho, zingabantu ipumelelo nezinye izindima bolwazi lwabantu. Ingabe ethembisa? Kungakhathaliseki indima le philologist kuyehla kuphela esihlalweni imitapo?
kolimi Classical noma hermeneutics?
Ngokuhamba kwesikhathi, isayensi, ngolimi lwethu abafundi, beba okuningi okuthakazelisayo. Phela, thina - omunye ukubonakaliswa okukhulu kakhulu komuntu. Lonke isiko ngandlela-thile ehlangene nakho. Kodwa uma ngaphambi isayensi, bafundzi ulimi, wagxila ikakhulu ku kolimi classical (ie isiGreki, isiLatini futhi ematheksthi labhaliwe kubo), kodwa manje ngisho lesi siyalo imingcele kuthiwa uyanda. Incazelo nokuqonda kwabanye abantu, kanye ngokubhala - ukuthi kuba isihloko hermeneutics. It uhlola imibhalo yasendulo nje kuphela, kodwa inqubo incazelo iyonke. Okunye eyala ukuthi zihlobene tinhlangotsi letehlukene kuvisisa inkulumo, zihlanganisa Psychology, izinhlelo, ubuhlakani, izifundo zamasiko ...
Awezezilimi ezweni lanamuhla
Le ndawo ubuchwepheshe ihlanganisa cishe zonke izinhlobo zesayensi, sifunda ulimi uqobo. Umuntu ozilimazayo akasiboni futhi uyinkimbinkimbi, futhi ezicini ezihlukahlukene, noma "izingqimba". Ngokwesibonelo, ohlangothini umsindo deal izigatshana ezifana amafonethiki, orthoepy, inkulumo esiteji, phonosemantics. Psycholinguistics etadisha ubuhlobo wezokusebenza kwengqondo yomuntu ulimi. Umbhalo - ukusebenza lovumelanako amazwi abhaliwe (umbhalo). Poetics, eyayikade ingxenye Classical kolimi, bekulokhu Inkulumo yobuciko. Isayensi ukuthi study zonke izilimi zomhlaba in a eziyinkimbinkimbi, - yezilimi - njalo elokhu ivela. Kukhona eyala ezintsha ezifana imfundiso yokuziphendukela zokuxhumana. izici osetshenziswayo abathembisa. Ngesisekelo salokho, by the way, kukhona abahumushi okuzenzakalelayo (ukuthatha okungenani efanayo Google Translate)? nje isikhathi sokuba nesifundo kwezibalo ulimi, morphology, engasho lutho (isayensi amagugu), isitayela,-syntax.
Abantu abaningi bacabanga, "ngiyabonga," ukuze lwezifundo zesikole, akukho kuyisicefe ngaphezulu slotting nemithetho isipelingi ( "Awu, ayini?"), Noma ngekhanda paradigms ka Isenzo conjugations noma isiZulu amabizo. Izincwadi nazo isiyalo eyisicefe kakhulu ngenxa yokufa-indlela. "Asho ukuthini?", "Yenza ukuhlaziya le nkondlo" ... Abafundi abaningi ngenxa alazi igama isayensi, bafunde izilimi. Yena, Okwamanje, nezici ngokuya ethembisa futhi kujabulise. Ngenxa yentuthuko kwezokuhlolwa kwezinkanyezi ubuchwepheshe bama-computer kungenzeka ukubona umbhalo kusuka isithombe. Ngiqinisekile abaningi baye nazo ukusesha ngezwi. Kukhona hhayi kuphela ugesi lwamagama, kodwa futhi imibhalo ngisho izinkondlo. Nakuba computer anikaqondi iyiphi shades of incazelo noma iphimbo, ezikufundayo njalo kanye nokwenza ngcono. Ngakho-ke yezilimi ezweni lanamuhla liba ethandwa futhi ethembisa ngaphezulu.
"Entanyeni Lather": Inani phraseologism nezibonelo
Okusho ukuthi "okuchichimayo". Ngokuchichima - kuyinto ...
"Futhi nezimpisi ezidla nezimvu yayinjalo": etymology kanye nencazelo izaga
Rusher - ubani lo? Meaning and definition
Isitsotsi IsiZulu: ubuqili ukusetshenziswa isitsotsi
Njengoba e "Bandikam" umsindo futhi ngcono ikhwalithi okuqoshiwe
Kuyini esilandelayo? Afterbirth ngemuva kokubeletha
Iklabishi okuhlobisa. Izindlela eziyinhloko kulinywe
Ukuhlala nge-microlift yangasese: ukubuyekezwa, ukufakwa, ukufakwa
"Gedeliks" imithi. Yokusetshenziswa
Cocktail "Cuba Libre" - ikhadi elivakashela iLiberty Island
Iphutha 0x0000007b (lwe-Windows 7 boot)
Edolobheni Estonia ka Narva: izinto ezindaweni ezithakazelisayo
I Coefficient ukuqinisela ozimele: ifomula. Inombolo emaphakathi abasebenzi
Isikhathi esiningi, kodwa yenza ufaneleke umzamo uqobo parquetry
I-Actovegin: imiyalo yokusetshenziswa